धोनीको छनोटलाई लिएर पुर्व बिश्वकप बिजेताले गरे खरो आलोचना – Talking Sports
भारतका पुर्व बिश्वकप बिजेता क्रिस श्रीकान्तले चेन्नई सुपर किंग्सका कप्तान महेन्द्र सिँह धोनीको खेलाडी छनोट गर्ने प्रकृयालाई लिएर खरो आलोचना गरेका छन् ।
धोनीको चेन्नई जारी इण्डियन प्रिमियर लिगमा १० मध्ये ७ खेलमा पराजित हुदै प्रतियोगिताबाट बाहिरिने संघारमा पुगेको छ । चेन्नई आफ्नो चार खेल जितेर मात्र नभएर अन्य खेलहरुको परिणाम पनि आफु अनुकुल निक्लनु पर्ने स्थितिमा आइपुगेपछि श्रीकान्तले धोनीको टिम सेलेक्सनलाई हास्यास्पद र फोहोरी भनेका छन् ।
“धोनीले के गर्न चाहिरहेका छन् ? उनी भन्छन् एन जग्दिशनमा त्यो चमक देखिएन तर स्कुटर (केदार) जाधवमा चाही के चमक छ र ? यो निकै हास्यास्पद छ । उनको यो जवाफ म स्विकार गर्न सक्दिन । टिम प्रकृयाको कुरा गर्दै गर्दा चेन्नईको लागि त प्रतियोगिता नै समाप्त भइसकेको छ,” श्रीकान्तले स्टार स्पोर्ट्सलाई दिइएको एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन् ।
“प्रकृयालाई लिएर धोनीले जे भनिरहेका छन् त्यो म स्विकार्न सक्दिन । उनले कुरा गरिरहेको प्रकृया अर्थहीन छ । उनी खाली प्रकृयाको कुरा गरिरहन्छन् तर यहा त सेलेक्सनको प्रकृया नै पूर्ण रुपमा गलत छ,” राजस्थान रोयल्ससँग पराजय बेहोरेपछि चेन्नाईले आईपिएलमा सातौं खेल हार्दा श्रीकान्तले भने ।
धोनीले राजस्थानसँग पराजित भइसकेपछि दिइएको अन्तर्वार्तामा युवा खेलाडीहरुले टिममा स्थान बनाउने गरि चमक नदेखाएको प्रतिकृया देखाएका थिए । धोनीले यसो भनिरहदा जग्दिशनमात्र युवा खेलाडी थिए जसले टिममा एक पटक स्थान बनाए । अर्का युवा खेलाडी साम कुरान भने नियमित रुपमा टोलीमा रहेका छन् ।
जग्दिशनले रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोर बिरुद्धको खेलमा ३३ रन बनाएका थिए तर त्यसपछि भने उनले स्थान पाएनन् । “अब दवाब नरहेको भन्दै धोनीले युवा खेलाडीहरुलाई स्थान दिने बताउछन् । म यो फोहोरी छनोटको प्रकृया नै बुझ्न सकिरहेको छैन । उनले जग्दिशन म के चकम देखेनन् र जाधव र पियुस चावलामा देखे ?,” श्रीकान्तले प्रतिप्रश्न गरे ।